Oct 18, 2019 1 min
အရင်တုံးက Manga ဖတ်မယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်နီးပါက ဖတ်လေ့ရှိတော့ အွန်လိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာနဲ့ အချင်းချင်း ဘယ်ဟာဖတ်လဲ ဖလှယ်ပြီးတော့ mangafox မှာဖြစ်ဖြစ်ရှာဖတ်လို့ရပေမယ့် အခုကြတော့ သူတို့ခမျာ ကြီးပျင်းလာတာနဲ့ ဒါတွေမဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ အခုထက်ထိ ဒါတွေ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့် ခမျာ အသစ်ဘာဖတ်မလဲတို့ ရှာရတဲ့ အလုပ်ကတိုးလာပါတယ်။ အခုလက်ရှိကတော့ ဟိုတလောကတွေ့တဲ့ Naisu Manga ဆိုတဲ့ Group ရယ်Lit Manga & Anime daily with source ဆိုတဲ့ group နှစ်ခုထဲဝင်ထားလိုက်တော့ အတော်ပါပဲ။ လူတွေကများတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာတွေချည်းပဲတင်နေတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် scroll လုပ်ရင်း save ပြီးနောက်အားမှ ပြန်ရှာဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။
Volume 1 Cover Image
အဲဒီ manga တွေထဲမှာမှ ဟိုတလောက Tokyo Revenger ဆိုတဲ့ Manga လေးဖတ်မိတာ ဖောက်သည်ချရဦးမယ်။ gangsta manga ဖြစ်ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းကတော့ ငယ်ငယ်က deliquent ဖြစ်ဖူးတဲ့ Takemichi တီဗွီကြည့်နေရင်းနဲ့ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရင်းနဲ့ သူရည်းစားဟောင်း ကြားကသေသွားတဲ့ သတင်းကိုကြည့်ပြီး စုံစမ်းရင်းနဲ့ အခန့်မသင့်ပဲ time leap ဖြစ်သွားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကာလ ကိုရောက်သွားပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်တာက အတိတ်မှာ သူပါဝင်ဖူးတဲ့ လူမိုက်ဂိုဏ်းက နောင် ၁၂ နှစ်မှာ အင်အားကြီးလာပြီး သူရည်းစားဟောင်းသေးဆုံးမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်နေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် Takamichi တစ်ယောက် သူ့ရည်းစားဟောင်းကို မသေအောင် အတိတ်ကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စတွေ့တွေ့ချင်းတုံးက ဆွဲတာလှလို့ရယ် ၊ သူတို့ဂိုဏ်း logo က Swastika logo ကြီးကိုမှ လှည့်တဲ့ ဘက်ပဲကွာသွားတာ ဆိုပေမယ့် facebook ကဘာလို့ မဘန်းတာလည်းဆိုတာ အံဩလို့ရှာကြည့်ရင်းနဲ့ ဖတ်ဖြစ်သွားတာပါ။
ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ manga လေးပါ။ ဆွဲတာကလည်း သေသေသပ်သပ်ရှိတယ်။ ပုံမှန်အာဖြင့် Gangsta Manga ကတွေက Yankee ကာလကအတိုင်း ရုပ်ကိုတမင်ဆိုးအောင် ၊ ကြောက်ဖို့ကောင်းအောင် မှင်ကို မဲသဲနေတဲ့ စတိုင်တွေနဲ့ရေးပေမယ့် ဒီ manga ကတော့ ဖတ်ရတာလွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆို Crow တို့ Worst တို့ကိုကြိုက်ပေမယ့် အရင်ခေတ်က ဒိဇိုင်းဖြစ်တာရယ် ဖတ်ရတာ တမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ ဒီမှာကတော့ ဒီနေ့ခေတ် လူတစ်ယောက် ဖတ်မယ်ဆိုရင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ပါတယယ်။ အဲဒီအပြင် time travel element ကို ရောသမမွှေထားပြီး မင်းသားကလည်း အရမ်း မ weak လွန်း OP မဖြစ်လွန်းတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်ကြိုက်တာတွေကတော့ cliche ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေမယ့် Character Design တိုင်းက မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Plot ကလည်း လက်ရှိ အနေအထားအရတော့ အရမ်းကြီးမှန်းလို့ရတဲ့ အနေအထားတော့မဟုတ်ဘူး။ ဖတ်မယယ်ဆိုရင်တော့ mangarock ကနေဖတ်လို့ရပါတယ်။
Sakura က ဘာလို့ အသုံးမကျတာလဲ
Sakura နဲ့ တစ်ဖွဲ့ထဲဖြစ်တဲ့ Naruto နဲ့ Sasuke တို့နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် အသုံးမကျဘူးဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း 'useless' လို့ပြောရလောက်တဲ့ Shinobi တွေလိုမျိုး တကယ်ပဲ အသုံးမကျတာလား?
By K Dec 18, 2019
ဒီလပိုင်း အလုပ်များ နေတော့ တခြား လေးလေးပင်ပင် စာအုပ်တွေ မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ တစ်မနက်လုံး အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတွေဖတ်လာတော့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်တဲ့ Manga,
By Aitin Sep 26, 2019
Subscribe to မှတ်စုတို
မှတ်စုတို © 2022. Powered by Ghost